Sound Patterns And Grammar In Burmese (2) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Literature/Books » Sound Patterns And Grammar In Burmese (2)
Sound Patterns And Grammar In Burmese (2)
Posted by TTNU on Aug 24, 2011 in Literature/Books | 8 comments
Burmese syllables can be divided into (5) categories.
ဒီအမျိုးအစား အားလုံးထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးက (Tone) အသံတုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ။ စာ (အသံတန်း) (Level Tone)
စ ( အသံမြင့်) ( Creaky Tone)
စား (အသံမြင့်မှ နိမ့်) (Heavy Tone)
စပ် ( အသံပိတ်၊ ရပ်) (Stop Tone)
Stop Tone ဆိုတာကတော့ Glottal Stop သံကိုဆိုလိုတာပါ။
” In Burmese, syllables with high tone are always rather short and closed byaglottal stop, and syllables with the falling and low tones have long vowels and said with breathy voice”
( O’Connor 1973 :241)
ဆရာ အိုကော်နာ အဆိုအရဆိုရင်တော့ ဗမာစကားမှာ အသံမြင့် တွေ ကို သံတို ထွက်ပြီး အဆုံးမှာ အသံပိတ် ထွက်တယ်၊ သံဆင်း သံနိမ့်တွေကို ( ရှေ့ ကပေါက် အသံ) အသံလေးနဲ့ထွက်တယ်၊ လို့ တွက်ဆရပါတယ်။
မိတ်ဆွေ၊ ဆက်မဖတ်ချင်လောက်အောင်ပျင်းသွားပြီ မဟုတ်လား။
ဒီလို ဒီလို သီအိုရီတွေရှိတယ်ကွ ဆိုပေမဲ့ ၊ အခုခေတ် ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ စကားပြောတာ နားထောင်ကြည့်စမ်းပါနော်။ တစ်ခါတစ်လေ သူတို့ စကားကို နားမလည်လိုက်ပါဘူး ။ FM Radio Announcer ကလေးမတွေ ပြောတာနားထောင်ရင်းနဲ့ ( ငါ ဗမာစကား မတတ်တော့ဘူးထင်တယ်) လို့ တွေးနေမိပါတယ်။
ဒီလိုမပီကြတာမှာ ( မသိဘူး ကနေ မတိဘူး) ဖြစ်သွားတာက တစ်ခြားကဏ္ဍနော် မရောလိုက်နဲ့ဦး။
Otherwise ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး အကြောင်း ပြောပြမယ်နော်။ သူ့ကို ဒေသအလိုက် အမျိုးမျိုး ဗမာစကားမှာ ကွဲပြားစွာ သုံးကြတယ်။
Funny? နောက်ဆုံး နံပါတ်(၅) က ကိုယ်တို့ နယ်ကပြောလေ့ရှိတာပါ။
ဒီနေ့ရဲ့  အနှစ်ချုပ် ကတော့ Sound Patterns တွေလေ့လာ ရတာ ပျင်းစရာကောင်းကြောင်း။ ဒီ Post လေးကို မတော်မဆ ဖတ်မိလို့ စိတ်ညစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါကြောင်း။
ဗမာ( မြန်မာ)စာသည် တို့(ဒို့)စာ ဗမာ( မြန်မာ)စကားသည် တို့(ဒို့)စကား..
စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဆက်ရေးပါ အားပေးနေပါတယ်။
Sound Patterns And Grammar In Burmese (1) တုန်းက မတွေ့လိုက်လို့ ရှာဖတ်လိုက်ပါဦးမယ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေကို မြန်မာစာသင်ပုံသင်နည်းလေးလည်း ရနိုင်လျှင် သိချင်ပါတယ်။
မိုးစက်တို့ရုံးမှာ တစ်ယောက်က မြန်မာစာရေးရင် (မှု) ကို အမြဲတမ်း အောက်ကမြစ်(့  ) ထည့်ရေးတယ်
မြန်မာတွေ အသံတော်တော်များများ ထွက်နိုင်ပေမဲ့… နိုင်ငံခြားသားတွေ ကျတော့ .. ဇော်တို့ .. ကျော်တို့ … အသံကောင်းကောင်းမထွက်နိုင်တာ တွေ့ရတယ် … ဥပမာ .. ဇော်ဆိုရင် ဂျော်လို့ ထွက်ပြီး … ဇင်ဆိုရင် ဂျင်မ်ဆိုပြီးရောချတယ် … ကျော်ကိုလည်း .. ကယောက်လိုအသံမျိုး … ထွက်တယ် … ဟီးဟီး ရယ်ရတယ်
ခုခေတ်ကောင်မလေးတွေ စကားမပီတာ ဖက်ရှင်ဖြစ်နေလားမသိဘူး
ကြည့်ရတာ အရင်ဘ၀က မုသာဝါဒ များခဲ့တယ်ထင်ပ
”FM Radio Announcer ကလေးမတွေ ပြောတာနားထောင်ရင်းနဲ့ ( ငါ ဗမာစကား မတတ်တော့ဘူးထင်တယ်) လို့ တွေးနေမိပါတယ်။” (မသိတာနဲ့ မတတ်တာပေါင်းပြီးရောချလိုက်တာလဲ ပါမှာပေါ့ TTNU ရယ်)။
It is welcoming suchatopic to be put into this column, Myanmar language seems to bealot more difficult to be pronounced as you prescribed. But it is Myanmar language that attracts me most as it sounds tricky and dangerous if we mispronounced. English also has, as far as I am concerned, some tricky pronunciation differing from how they are spelled as in League or Antique. Well, I would rather welcome you keep on writing this grand topic of yours:Sound Patterns and Grammar in Burmese. What is more, Myanmar grammar is like Subject+Object+Verb but in English Subject+Verb+Object. For example: ကျွန်တော့်မှာဆယ်ဒေါ်လာရှိတယ်၊ ကျွန်တော့်မှာ is Subject ဆယ်ဒေါ်လာ is Object ရှိတယ် is Verb. But in English: I have $10. It is totally different. Anyway I like your Topic and Idea. Please keep on and on. Thank u.
yes, i agree with Sonny . keep on.